Ny 8 safidy tsara indrindra amin'ny AirTags ho an'ny Android | Androidsis
Ignacio Sala | | Fitaovana hafa
Ny rafitry ny toerana dia tsy zava-baovao, raha ny marina, efa an-tsena an-taonany maro izy ireo na dia misy fandidiana hafa aza satria mifandray amina karatra SIM iray, ampiasain'ny orinasa ho an'ny fanaraha-maso ny fiaramanidina fiara.
Na izany aza, tamin'ny fanombohan'ny AirTags, fanilo toerana izay ahafahantsika mahita zavatra rehetra ao an-trano ary raha very an-trano izy io, dia toa namerina ny kodiarana i Apple, raha tena tsy izany. Raha ny marina, AirTags izy ireo no farany nahavoa ny tsena.
Volana maro talohan'ny fampisehoana ofisialy ny AirTags, Samsung dia nanolotra ny Galaxy SmartTags. Ela be talohan'izay, ny orinasa Tile dia nanangana fanilo toerana izay tena revolisionan'ity karazana fitaovana ity. Saingy tsy izy ireo ihany. Raha te hahalala ny tsara indrindra ianao safidy hafa amin'ny Apple AirTags izany asa amin'ny Android izany, manasa anao aho hanohy hamaky.
Raha miresaka momba ny Tile isika dia tsy maintsy miresaka ny orinasa voalohany nandefa fanilo toerana. Ireo beacon toerana ireo dia mampiasa mpampiasa tambajotran'izy ireo manokana hitadiavana zavatra nanjavona tsy hitanay, very izahay, nangalatra taminay ...
Amin'ny alàlan'ny rindranasa Android dia azontsika atao ny maneno ny fitaovana raha akaiky izany na tadiavo amin'ny sarintany raha lavitra, izy rehetra maimaim-poana ary tsy mila mandoa famandrihana.
Tile dia mametraka eo am-pelatanantsika Modely 4 samy hafa, maodely izay lazainay eto ambany:
Tile Stikcer dia manasongadina ny a adhesive izay ahafahantsika manamboatra ny fanilo amin'ny fitaovana rehetra ary ampiasao ny fampiharana hahitana ilay fitaovana rehefa manjavona ny fahitana. Mety ny mahita ny fanaraha-maso lavitra ho an'ny fahitalavitra rehefa manao dia lavitra ianao amin'ny alàlan'ny sezaky ny sofa, ny fakantsary, ny lakilen'ny trano, ny takelaka ...
Manana a 36mm hahatratra maharitra mandritra ny 2 taona ny bateria, tsy tantera-drano, tsy misy afa-tsy amin'ny mainty, misy ny vidiny 39,99 euro amin'ny fonosana 2 unit na 64,99 euro amin'ny fonosana 4 unit. 27 mm x 7,3 mm ny habeny ary misy mpandahateny kely hamoaka feo izay hanampy antsika hahita ireo zavatra very.
Tile Pro mampiditra sakantsakana hitondra azy mora foana amin'ny fanalahidy, kitapo kitapo ary zavatra hafa izay tsy tiantsika ho very. Ity no maodely misy ny laharana lava indrindra hatramin'ny Bluetooth 122 metatra.
Mampiditra mpandahateny izay mamoaka dB avo kokoa noho ny maodely hafa natolotr'i Tiles, ny bateria azo soloina maharitra 1 taona, tsy tantera-drano (tsy tantera-drano) ary manana habe 42x42x6,5mm. Ity maodely ity dia misy loko mainty, fotsy, mavokely, manga sy mena lehibe.
Ny vidin'ny 1 Tile Pro dia 34,99 euro, ny fonosan'ny 2 Tile Pro dia 59,99 euro raha ny fonosan'ny 4 dia lasa hatramin'ny 99,99 euro.
Ny Tile Slim dia natao ampiasao amin'ny toerana tery, toy ny ao anaty kitapom-batsy, eo amin'ny foy, eo amin'ny tagan'ny valizy. Misy loko io mainty, mavokely, manga sy mena lehibe, manana sakany 61 metatra.
Izy io dia mampiditra mpandahateny izay amoaka ny feo hahafahantsika mahita ilay zavatra ampifandraisina (matetika kitapom-batsy na kitapo), ny bateria tsy azo soloina maharitra 3 taona, tsy tantera-drano izy ary manana habe 86x54x2,4 mm.
Ny vidiny dia 29,99 euros ho an'ny singa iray raha 2 euro ny fonosana 59,98 unit.
Ny Tile Mate dia manolotra endrika ho antsika tena mitovy amin'ny Tile Pro misy lavaka mihantona amin'ireo zavatra tiantsika hofehezina foana, saingy miaraka amin'ny antsasaky ny faritry ny bluetooth: 61 metatra
Izy io dia mampiditra mpandahateny izay amoahany ny feo ahafahantsika mahita ilay zavatra ampifandraisina, ny bateria azo soloina ary maharitra 1 taona izy io, tsy tantera-drano ary manana habe 35x35x6,2 mm.
Ny Tile Mate dia sarany 24,99 euros. Ny fonosana roa-singa dia 47,99 euro ary ny fonosana 4-unit dia tafakatra 69,99 euro. Amin'ny fotsy ihany no misy azy.
Ny vidiny rehetra voalaza ho an'ny fanilo Tile dia mifanaraka amin'ny tranonkalan'ny orinasa. Raha irintsika vonjeo izahay euro vitsivitsy, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny mividy azy ireo mivantana amin'ny Amazon amin'ny alàlan'ny Ity rohy ity.
Ny Galaxy SmartTag no safidy mahomby indrindra amin'ny AirTag satria ankoatry ny fiasa ho toy ny tracker object, ampidiro bokotra Azontsika atao ny mametaka fitaovana an-trano hafa mifanentana mba hanao hetsika toy ny fanokafana ny varavaran'ny garazy, famonoana ny jiro rehetra ao an-trano, fampandehanana na famonoana ny fanairana ...
Raha ny famolavolana, dia mitovy amin'ny sisa amin'ny toerana fanilo izay azontsika jerena eny an-tsena, misy lavaka ao amin'ny tapany ambony hitazonana azy. Mikasika ny habeny dia mitovy ihany koa amin'ny ambiny amin'ireo vahaolana eny an-tsena (39x10x19 mm). Ny Galaxy SmartTags dia misy amin'ny kinova roa:
SmartTag mampiasa standard Bluetooth 5.0 Low Energy (LE)
SmartTag + Araraoty ny tarika ultra-wide (UWD) hanarahana ireo zavatra.
Raha ny lafiny fandidiana dia samy miasa amin'ny fomba mitovy. Ny elanelam-be misy ny jiro mpamantatra Samsung dia Metatra 120, toa ny Tile Pro, 20 metatra mihoatra ny Apple AirTags.
Raha te hahalala ilay zavatra ampifandraisina, dia mila mampiasa ny Galaxy Find, tambajotra iray izay isika ampiasao ny finday avo lenta Samsung mba hahitana ny toerana misy ny fanilo very isika raha tsy misy mpampiasa mandalo eo akaikiny, mahazo fampandrenesana (fiasa mitovy amin'ny AirTag an'ny Apple).
Ny hany tokana fa hitantsika ao amin'ny Galaxy SmartTag, dia mitovy amin'ny AirTags: izy ireo dia mifanentana afa-tsy ao anatin'ny tontolo iainana. Izany no raha tsy manana smartphone Samsung ianao, tsy afaka mandeha mieritreritra safidy hafa ianao.
Ny vidin'ny Samsung Galaxy SmartTag dia manodidina 29,99 euros, na dia ao amin'ny Amazon aza no ahitantsika azy ireo miaraka amin'ny fihenam-bidy mahaliana raha mividy isika una o singa hafa. Hita amin'ny loko fotsy sy beige izy io.
Raha amin'izao fotoana izao, ny hany zavatra tsy tianao momba ireo fanilo eto an-toerana dia ny fisian'ny loko, dia tokony hodinihinao ny safidy apetrak'i Chipolo eo am-pelatanantsika miaraka amin'i Chipolo ONE. Ny Chipolo ONE dia manana a famolavolana boribory misy lavaka iray izay ahafahantsika manantona azy amin'ny lakile, kitapo, kitapo ...
Ny teboka manan-danja hafa amin'ireto fanilo ireto dia ny fahaizana mamoaka feo 120 db tena ilaina izany raha mahita zavatra very na diso toerana ianao. Mampiditra a bateria azo soloina Maharitra roa taona izy ary mahazaka splash (IPX5) fa tsy milentika.
Es mifanaraka amin'ny Amazon Alexa sy Google Assistant, mba hahafahantsika mifehy ny toerana misy anao amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo. Ho fanampin'izany, ahafahantsika manamboatra ny fanairana amin'ny finday mba tsy hamelantsika ilay zavatra ampiarahina aminy, fiasa mety indrindra ho an'ny clueless be indrindra izay azo alaina ihany koa amin'ny sisa amin'ireo jiro izay miresaka momba an'io lahatsoratra.
Fanilo any Chipolo azo alaina ao amin'ny Amazon ho an'ny 24,90 euros amin'ny mavo, fotsy, manga, mainty, mena ary maintso ary mirefy 38x38x7 mm.
Toy ny Samsung SmartTags, ny Cube Pro dia mampiditra bokotra ao amin'ilay fitaovana, bokotra iray izay mamela antsika hampiasa fotsiny toy ny fanaraha-maso lavitra fakan-tsary an'ny finday avo lenta. Izy io dia manana mpandahateny izay mamoaka feon'ny 101 dB, noho izany dia tsy ho sarotra ny mahita ireo zavatra very ary te ho sitrana.
Ny bateria azo soloina dia maharitra maharitra herintaona tantera-drano IP67. Rehefa miala amin'ny fitaovana nampiarahantsika ity fanilo ity isika dia hamoaka fanairana ny fampiharana hampahatsiahy antsika fa niditra tao amin'ilay maody isika clueless.
Ny teboka ratsy an'ireo fanilo ireo dia izany Izy io dia manana elanelana amin'ny alàlan'ny Bluetooth izay 60 metatra fotsiny, raha ny ankamaroan'ny safidy eto amin'ity lisitra ity dia mihoatra an'io lavitra io. Ny jiro Cubre Pro dia mitentina $ 29,99 ary tsy misy any Espana amin'izao fotoana izao.
Ny Filo Tag beacons dia miala amin'ny famolavolana boribory mahazatra, manome anay a endrika mahitsizoro miaraka amin'ny refy 21x41x5 cm, manana 80 metatra isan-karazany ary ny bateria, azo soloina, dia manome antsika 12 volana.
Eo an-tampony, dia misy karazana kofehy izay mamela antsika hametraka ny fanilo amin'ny kitendry key, kitapo, kitapo… Ary mampitandrina antsika rehefa miala amin'ny fitaovana isika.
Mampiditra bokotra iray izay rehefa tsindriana indroa dia manomboka playback amin'ny finday, na dia mangina aza ilay fitaovana, dia jiro izany mety ho an'ireo zatra tsy mahatadidy na mora very na ny lakile na ny telefaona.
Ny jiro mpamantatra Filo Tag dia misy amin'ny loko mena, mainty, manga sy fotsy ary ny vidiny isaky ny singa dia 29,90 euros. Tsy toy ny vokatra rehetra voalaza amin'ity lahatsoratra ity, ny Filo Tags dia noforonina sy novokarina tany Italia.
Mba hanararaotana ireo fiasa rehetra omen'ny Filo Tag anay tsy mila mandoa karazana famandrihana ary ny fampiharana, azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » Top 8 safidy hafa amin'ny AirTags ho an'ny Android